Akụkọ - Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na arụmọrụ nke igwe Carton ga - ebelata
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na arụmọrụ nke igwe Cartoning na - ebelata
Igwe Cartoning bụ igwe nwere ezigbo arụmọrụ na ogo. Ojiji oge, enweghị ike ijide oge, wdg. Bụ ihe niile kpatara ma ọ bụ mmetụta ndị igwe na-etinye na-enweghị ike ịrụ ọrụ. Iji nwee ike iji igwe katọn rụọ ọrụ ogologo oge, ọ dị mkpa iji mee ka mmezi ya sie ike.
Mgbe ị na-eji ụdị igwe katọn a, arụmọrụ ọrụ anaghị adịkarị elu n'ihi arụ ọrụ na-ekwesịghị ekwesị. Taa, m ga-achọ igosi gị otu esi eji igwe na-etinye aka.
1. Tupu ojiji, onye obula aghaghi ime nkwado di nkpa. Lelee ma edozi ngwaọrụ nchekwa niile ma gbanwee, yana lelee ma ọnụọgụ mmanụ na mmanu ikuku dị n'ime oke akọwapụtara.
2. Gbanye ike, mechie mgba ọkụ akpaka na igbe eletrik, ike na ihuenyo mmetụ, gosipụta ihuenyo izizi, jiri nwayọ pịa ebe ọ bụla na ihuenyo izizi, metụ ihuenyo ahụ iji tinye interface nhọrọ asụsụ, jiri nwayọ pịa iji asụsụ iji tinye ọrụ interface.
3. Pịa bọtịnụ mgbapụta mmanụ wee jiri aka tinye mmanụ na-ete mmanụ maka ihe dịka 10 sekọnd. Kwesịrị ịdọpụ wiilị aka ma gbanwee ya maka usoro ịrụ ọrụ 3 ruo 4 dịka usoro nke igwe ahụ siri dị. Lezienụ anya n'ọrụ nke akụkụ nke ọ bụla, wee tinye igbe akwụkwọ na bọọdụ ọgwụ, Ntuziaka, gbanwee wiilị aka, ma soro ọrụ igwe ahụ. Lezienụ anya n'ọrụ nke akụrụngwa nke ọ bụla n'oge a, ma dozie ya n'oge ọ dị mkpa.